China OEM ambony kalitao sakafo ambony ivory birao / FBB / SBS Birao orinasa mpanamboatra sy ny mpamatsy | PAPER azo antoka
OEM ambony latabatra ivory sokajy sakafo / taratasy FBB / SBS Board
Anaran'ny vokatra: OEM ambony latabatra ivory sokajy sakafo / taratasy FBB / SBS Board
Kaody momba ny vokatra: 4802550090
Fitaovana: Pulp virjina 100%
Fampiasana: boaty ho an'ny mpanjifa, kitapo tanana, karatra anarana, karatra fanasana, marika ahantona ary fisie izay manarona ny fanovana ary koa tanjona hafa fonosana sy fitaovana
Fonosana: Fonosana / fonosana be / fonosana ream
Kaomandy kely indrindra: 1 TON
Seranan-tsambo: Seranan-tsambo Ningbo
Anaran'ny vokatra: OEM ambony latabatra ivory sakafo avo lenta / taratasy FBB / SBS Board
Fonosana: fonosana / fonosana / fonosana ream-paosy na fomba fanamboarana namboarina
Seranana: seranan-tsambo Ningbo
1.) Ny kilasy fisakafoanana FBB dia manana fampiharana isan-karazany, ao anatin'izany ny kosmetika, sôkôla, fikarakarana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana, fidiovana, sakafo maina, sakafo mangatsiaka sy mangatsiaka, dite sy kafe, biscuits, entana namboarina, akanjo, kilalao, kilalao ary vokatra sary . Ny FBB koa dia azo alaina plastika vita amin'ny plastika, voahosotra miaraka amin'ny fitaovana toy ny foil aluminium ary ny taratasy fanaporofoana menaka ary omena fanoherana menaka sy fitsaboana hafa miasa.
2.) Zava-ilaina: 170-400gsm
3.) Habe: amin'ny ravina na coil
4.) Loko: fotsy
5.) Fotsy: 89%
6.) Coating: lafiny tokana na roa
7.) Kalitao: Kilasy A
8.) kalitaon'ny vatan'ny virijina 100%
9.) Fahamalinana avo lenta sy loko feno fanontana offset
10.) fanoherana mahery vaika
11.) Ny hateviny lehibe
12.) Fanamboarana entana mahazatra sy serivisy matihanina
13.) Lanja fototra 170g-190g-210g-230g-250g-270g-300g-350g-400g
14.) Manisy Qty: 14-17Tons isaky ny kaontenera 20ft, 25Tons isaky ny kaontenera 40HQ
Ary halefanay mivantana avy any amin'ny trano fanatobiana entana ao amin'ny port ningbo.FCL
Izahay dia masoivohon'ny APP (iray amin'ny taratasy lehibe lehibe indrindra manerantany, ary ny taratasy "Hi-kote" & "NIVIA" dia avy amin'ny APP ihany koa) eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina, azafady mba andramo ny fotoana hijerenao ny mombamomba azy etsy ambany. APP, ny azoko atao dia ny mamela anao hampiasa vola kely kokoa hahazoana ny taratasy kalitao avo lenta ary hanatsara ny tombotsoanao sy ny orinasanao.
1: Afaka mahazo santionany maimaimpoana ve aho?
A: Ho an'ireo entana efa ananantsika ao anaty srocks na maodelin'ny ozininay io.ka afaka manome anao maimaimpoana izahay santionany, ianao ihany no mila mandoa ny saram-pitaterana.
2: azonao ekena ve ny habetsany kely?
A: Ho an'ireo entana efa ananantsika na ny maodelin'ny ozininay.ary ekentsinay ny habetsany kely dia kely.
3: Hafiriana ny fotoana famokarana?
A: Raha misafidy habetsahana kely ianao izay efa anananay tahiry. Azonay alefa aminao mandritra ny herinandro. Ho an'ny entana vaovao. Mangataha 30 andro.
4: Manaiky ny fangatahana OEM ve ianao?
A: Mazava ho azy fa manaiky izahay.
5: Ahoana no hinoako ny vokatrao?
A: Ny vokatra rehetra azonay dia mandalo fitsapana kilasy sakafo ary manana ny tatitra momba ny fitsapana. Tongasoa hitsidika anay raha tianao, izay nahita azy tsara kokoa noho ny re.
6 ： Ny orinasananao na orinasanao varotra?
A: fototra iorenan'ny orinasa any amin'ny faritanin'i Zhejiang izahay
7: inona ny laharan'ny orinasao?
A: Orinasa vondrona taratasy izahay izay nanam-pahaizana manokana tamin'ny famonosana taratasy sy fanontana taratasy mihoatra ny 11 taona
taratasy birao: taratasy / taratasy miloko / taratasy tsy misy karbonika (NCR) / taratasy mafana
taratasy fanontana: taratasy kanto / taratasy offset hazo / taratasy mirakotra maivana (LWC)
pcaking taratasy: tabilao kanto / taratasy ivoara (FBB)
Teo aloha: Orinasa ambongadiny Kraft Paper Soup Bowl Container - famolavolana vaovao Avy amin'ny APP friendly cup (EPP mifono) Food grade Bio de-gradeable taratasy - PAPER azo antoka
Manaraka: Super C1S Fanding Box Board / GC1 ivory board / High Bulk in Roll and Sheet
300 Gsm Sakafo Garde Fbb Ivory Board
Fbb Ivory Board C1s Sakafo
Birao Ivory Kilasy Sakafo Sakafo
Kilasy fisakafoanana taratasy ivo-birao